Bit By Bit - agba nwere - 4.5.2 Onye Mmekọ ahụ dị ike na
Partnering ike belata-akwụ ụgwọ na-amụba n'ọtụtụ a, ma ọ pụrụ ịgbanwe iche iche nke sonyere, agwọ ọrịa, na a ga esi na i nwere ike iji.
The ọzọ na-eme ya onwe gị na-partnering na a dị ike na nzukọ ndị dị otú ahụ dị ka a ụlọ ọrụ, ọchịchị, ma ọ bụ NGO. The uru nke na-arụ ọrụ a na onye òtù ọlụlụ bụ na ha nwere ike ka i nwee ike na-agba ọsọ nwere na ị pụghị ime site onwe gị. Dị ka ihe atụ, otu n'ime nchọpụta nke m agwa gị banyere n'okpuru aka 61 nde sonyere; ọ dịghị onye na-eme nchọpụta pụrụ ịrụzu na ọnụ ọgụgụ. N'otu oge ahụ na partnering enwekwu ihe ị pụrụ ime, ọ na-, n'out oge, constrains gị. Dị ka ihe atụ, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-agaghị ekwe ka ị na-agba ọsọ nnwale nwere ike imebi ha azụmahịa ma ọ bụ aha ha. -Arụ ọrụ na mmekọ pụtakwara na mgbe ọ na-abịa oge na-ebipụta, ị nwere ike nrụgide "re-eku" gị results, na ụfọdụ ndị mmekọ pụkwara ọbụna ịgbalị igbochi n'akwụkwọ nke ọrụ gị ma ọ bụrụ na ọ na-eme ha anya ọjọọ. N'ikpeazụ, partnering na-abịa na-akwụ ụgwọ ndị metụtara ịzụlite na ịnọgide ndị a collaborations.
The isi ịma aka a ga-edozi iji mee ka ndị a mmekọrịta ịga nke ọma na-enwe a ụzọ mee ka ọdịmma nke abụọ ọzọ, na a na-enye aka n'ụzọ na-eche banyere na itule bụ Pasteur si Quadrant (Stokes 1997) . Ọtụtụ ndị nnyocha na-eche na ọ bụrụ na ha na-arụ ọrụ na ihe ndị bara uru-nke nwere ike ịmasị a na onye òtù ọlụlụ-ahụ na a gaghị eme n'ezie sayensị. Nke a mindset ga-eme ka ya ike ike ihe ịga nke ọma mmekọrịta, na ọ na-eme na-kpam kpam ihe ọjọọ. Nsogbu na ihe a echiche na-ebube site n'ihe ụzọ na-emetụbeghị nnyocha nke bayoloji Louis Pasteur. -Arụ ọrụ na a azụmahịa gbaa ụka oru ngo iji tọghata biiti ihe ọṅụṅụ n'ime mmanya, Pasteur chọpụtara a ọhụrụ na klas nke microorganism nke mesịrị duga izizi Ozizi ọrịa. Nke a chọpụtara edozi a dị nnọọ irè nsogbu-ọ nyeere melite usoro gbaa ụka-na ọ na-eme ka a isi na nkà mmụta sayensị tupu. N'ihi ya, kama iche banyere nnyocha na ndị bara uru ngwa dị ka ndị na-emegide ezi nnyocha sayensị, ọ dị mma na-eche echiche nke ndị a dị ka abụọ dị iche iche akụkụ. Research nwere ike na-ahụ ojiji (ma ọ bụ) ma research nwere ike na-achọ isi nghọta (ma ọ bụ). Critically, nnyocha-dị ka Pasteur's-ike ga-akwali eji na-achọ isi nghọta (ọgụgụ 4.16). Research na Pasteur si Quadrant-research na-apụtụghị Ọganihu mgbaru ọsọ abụọ-bụ ezigbo maka collaborations n'etiti nnyocha na ndị mmekọ. Nyere na ndabere, Aga m na-akọwa abụọ ibuo ọmụmụ mmekọrịta: onye na otu ụlọ ọrụ na otu na otu NGO.
Ọgụgụ 4,16: Pasteur si Quadrant (dabere na Fig 3.5 si Stokes (1997) ). Kama na-eche echiche nke nnyocha dika nke "isi" ma ọ bụ "etinyere" ọ ka mma na-eche nke nnyocha dị ka akwali ojiji (ma ọ bụ) ma na-achọ isi nghọta (ma ọ bụ). Otu ihe atụ nke nnyocha na ma na-akwali eji na-achọ isi nghọta Pasteur ọrụ on n'ịtụgharị biiti ihe ọṅụṅụ n'ime mmanya nke na-eduga nje Ozizi ọrịa. Nke a bụ ụdị ọrụ ahụ kasị mma ruru eru maka mmekọrịta na ndị dị ike. Ihe atụ nke ọrụ akpali eji ma nke ahụ adịghị achọ isi nghọta na-abịa site Thomas Edison, na ihe atụ nke na-arụ ọrụ na-adịghị akwali eji ma nke na-achọ aghọtali si Niels Bohr. Lee Stokes (1997) n'ihi na a ọzọ ntụle zuru ezu banyere ihe a kpuchie na onye ọ bụla n'ime okwu ikpe ndị.
Nnukwu ụlọ ọrụ, karịsịa tech ụlọ ọrụ, mepụtara incredibly ọkaibe akụrụngwa maka na-agba ọsọ mgbagwoju nwere. Na tech ụlọ ọrụ, ndị a nwere na-akpọkarị A / B ule (n'ihi na ha nwalee irè nke abụọ agwọ ọrịa: A na B). Ndị a nwere na-ugboro ugboro na-agba ọsọ n'ihi ihe ndị dị ka ịba ụba pịa-site udu on mgbasa ozi, ma otu ibuo akụrụngwa nwekwara ike-eji maka nnyocha na Ọganihu na nkà mmụta sayensị nghọta. Otu ihe atụ nke gosiri na nwere nke ụdị nnyocha bụ a nnyocha a ediomi n'etiti eme nnyocha na Facebook na University of California, San Diego, na mmetụta dị iche iche ozi na Voter turnout (Bond et al. 2012) .
On November 2, 2010-ụbọchị nke US congressional ntuli aka-nile 61 nde Facebook ọrụ na-ebi na US na ihe karịrị 18 wee akụkụ ke nnwale banyere ịtụ vootu. N'elu eleta Facebook, ọrụ e enweghị usoro kenyere ọrụ n'ime otu nke atọ dị iche iche, nke kpebisiri ihe ọkọlọtọ (ma ọ bụrụ na ọ bụla) e enịm ke n'elu ha News Feed (ọgụgụ 4.17):
informational ozi banyere ịtụ vootu na a clickable "M tozuru oke" button na a counter (Ama).
informational ozi banyere ịtụ vootu na a clickable "M tozuru oke" button na a counter + aha na foto nke ndị enyi ha bụ ndị na ama pịrị ndị "M tozuru oke" (Ama +-elekọta mmadụ).
Nkekọ na ndị ọrụ ibe mụọ isi ihe abụọ a ga esi: kọrọ ịtụ vootu omume na n'ezie ịtụ vootu omume. Mbụ, ha chọpụtara na ndị mmadụ na info +-elekọta mmadụ otu ra ka 2 pasent ihe ọzọ yiri ka ndị mmadụ na info ìgwè pịa "M tozuru oke" (maka 20% vs 18%). Ọzọkwa, mgbe na-eme nnyocha merged ha data na n'ihu ọha dị ịtụ vootu ndekọ n'ihi na ihe 6 nde mmadụ na ha chọpụtara na ndị mmadụ na info +-elekọta mmadụ otu ndị 0,39 pasent ihe ọzọ yiri ka n'ezie votu karịa ndị na-achịkwa ọnọdụ nakwa na ndị mmadụ na info otu dị nnọọ ka o yiri ka votu dị ka ndị na-achịkwa ọnọdụ (ọgụgụ 4.17).
Ọgụgụ 4,17: Results si a ịba si-the-votu nnwale on Facebook (Bond et al. 2012) . Ndị na-info otu tozuru oke n'otu ọnụego dị ka ndị na-achịkwa ọnọdụ, ma ndị na info +-elekọta mmadụ otu tozuru oke na a ubé elu ọnụego. Ogwe-anọchi anya Ndị e mere atụmatụ na na 95% obi ike etiti oge. Results na eserese na-agụnye banyere 6 nde sonyere n'ihi na onye na-eme nnyocha nke pụrụ ịdị na-ịtụ vootu ndia.
Ihe a na-egosi na ụfọdụ online esi-si-na-votu ozi dị irè karịa ndị ọzọ, ọ na-egosi na-eme nchọpụta si atụmatụ nke irè nke a ọgwụgwọ nwere ike adabere ma ha na-amụ kọrọ akụkọ ma ọ n'ezie omume. Ihe a dị mwute ikwu na adịghị enye ọ bụla clues banyere usoro site na nke na-elekọta mmadụ ozi-nke ndị nnyocha ụfọdụ na playfully akpọ a "ihu ikpo" -increased ịtụ vootu. O nwere ike, na-elekọta mmadụ ozi ụba nke puru na onye chọpụtara ọkọlọtọ ma ọ bụ na ọ mụbara puru na onye chọpụtara ọkọlọtọ n'ezie tozuru oke ma ọ bụ ha abụọ. N'ihi ya, ihe a na-enye ihe na-akpali Inweta na n'ihu na-eme nchọpụta ga-abụ na inyocha (lee eg, Bakshy, Eckles, et al. (2012) ).
Na mgbakwunye na ịka ihe mgbaru ọsọ nke na-eme nnyocha, ihe a na-merela agadi ihe mgbaru ọsọ nke onye nzukọ (Facebook). Ọ bụrụ na ị na-agbanwe omume na-amụ ịtụ vootu ka ịzụ ncha, mgbe ahụ, ị pụrụ ịhụ na ọmụmụ nwere kpọmkwem otu ihe owuwu dị ka nnwale tụọ mmetụta nke online mgbasa ozi (lee eg, Lewis and Rao (2015) ). Ndị a ad irè ọmụmụ ugboro ugboro tụọ mmetụta nke inweta ihe online mgbasa ozi-ahụ agwọ ọrịa ke Bond et al. (2012) nwere ihu ọma mgbasa ozi maka ịtụ vootu-on offline omume. N'ihi ya, ọmụmụ a nwere ike ina-akwado Facebook nwere ikike na-amụ irè nke online mgbasa ozi na nwere ike inyere aka Facebook kwenye nwere akpọsa ngwá ahịa na Facebook mgbasa ozi ndị dị irè.
Ọ bụ ezie na ọdịmma nke ndị na-eme nnyocha na mmekọ e ukwuu n'ime kwekọọ n'ihe ọmụmụ nke a, ha kwesịkwara ikpe na-erughị ala. Karịsịa, oke nke sonyere na atọ na ọnọdụ na-eweta, Ama, na Ama +-elekọta mmadụ-e tremendously imbalanced: 98% nke sample e kenyere ya info + elekọta mmadụ. Nke a imbalanced oke bụ adighi ike statistically, na a ka mma oke maka nnyocha gaara ndidi 1/3 n'ime ndị sonyere nke ọ bụla otu. Ma, ndị imbalanced oke mere n'ihi Facebook chọrọ onye ọ bụla na-enweta ndị info +-elekọta mmadụ ọgwụgwọ. Ọ dabara nke ọma, na-eme nnyocha mere ka o doo ha jide 1% maka a yiri ọgwụgwọ na 1% nke ndị keere òkè n'ihi na a akara otu. Enweghị akara otu ọ gaara ihu ọma agaghị ekwe omume tụọ mmetụta nke info +-elekọta mmadụ omume n'ihi na ọ gaara a "perturb na-edebe" nnwale kama a enweghị usoro na-achịkwa nnwale. Ihe atụ a na-enye a bara uru bara uru n'ihi na-arụ ọrụ na mmekọ: mgbe ụfọdụ ị mepụtara nnwale site n'igwa onye na-anapụta a ọgwụgwọ na mgbe ụfọdụ ị na ịmepụta otu nnwale site n'igwa onye bụghị iji napụta a omume (ie, ike a na-achịkwa otu).
Partnership ọ bụghị mgbe nile mkpa abuana tech ụlọ ọrụ na A / B ule na ọtụtụ nde ndị sonyere. Dị ka ihe atụ, Alexander Coppock, Andrew maa, na John Ternovski (2016) partnered na gburugburu ebe obibi NGO (League of Conservation Voters) na-agba ọsọ nwere ule dị iche iche na azum maka ịkwalite-elekọta mmadụ nchikota ndi mmadu di. The nnyocha na-eji ndị NGO si Twitter akaụntụ, ka O zipụ ha abụọ ọha tweet ma onwe kpọmkwem ozi na nwara isi dị iche iche nke identities. The eme nnyocha mgbe ahụ tụrụ nke ozi ndị a bụ kasị dị irè maka ịgba ndị mmadụ ume iji banye a aririọ na retweet ọmụma banyere a mkpesa.
Isiokwu 4.3: Ihe Nlereanya nke nnyocha nke na-abịa site ediomi n'etiti nnyocha na ndị òtù. Mgbe ụfọdụ, ndị na-eme nnyocha na-arụ ọrụ na òtù.
Mmetụta nke Facebook News Nri on ọmụma ekere òkè Bakshy, Rosenn, et al. (2012)
Mmetụta nke ele mmadụ anya n'ihu anonymity on omume on online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị website Bapna et al. (2016)
Mmetụta nke Home Energy Akụkọ na ọkụ eletrik ojiji Allcott (2011) ; Allcott and Rogers (2014) ; Allcott (2015) ; Costa and Kahn (2013) ; Ayres, Raseman, and Shih (2013)
Mmetụta nke na-eji ngwa imewe na malitere ịrịa mgbasa Aral and Walker (2011)
Mmetụta nke na-agbasa usoro on mgbasa Taylor, Bakshy, and Aral (2013)
Mmetụta nke na-elekọta mmadụ ozi na mgbasa ozi Bakshy, Eckles, et al. (2012)
Mmetụta nke katalọgụ ugboro ole na ahịa site katalọgụ na online maka dị iche iche nke ndị ahịa Simester et al. (2009)
Mmetụta nke na-ewu ewu ozi na ikike na ọrụ ngwa Gee (2015)
Mmetụta nke mbụ ratings on ewu ewu Muchnik, Aral, and Taylor (2013)
Mmetụta nke ozi ọdịnaya na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nchikota ndi mmadu di Coppock, Guess, and Ternovski (2016)
N'ozuzu, partnering ahụ dị ike na-enyere gị rụọ ọrụ na a ọnụ ọgụgụ na-esi ike ime ihe megidere, na Isiokwu 4.3 na-enye ihe atụ ndị ọzọ nke mmekọrịta dị n'etiti na-eme nnyocha na òtù. Partnering pụrụ ịdị nnọọ mfe karịa ewu gị onwe gị na nnwale. Ma, ndị a uru na-eso ọghọm: amụma mmekọrịta nwere ike amachi iche iche nke sonyere, agwọ ọrịa, na a ga esi na i nwere ike na-amụ. Ọzọkwa, ndị a mmekọrịta pụrụ iduga usoro ziri ezi ihe ịma aka. The ụzọ kasị mma ịnọ na ohere maka a mmekorita bụ na-achọpụta a ezigbo nsogbu na ị nwere ike idozi mgbe ị na-eme na-akpali sayensị. Ọ bụrụ na ị na-adịghị eji a n'ụzọ nke na-achọ na ụwa, ọ na-esi ike ịnọ na nsogbu na Pasteur si Quadrant, ma na-eme, ị ga-amalite na-achọpụta ha ọzọ na ndị ọzọ.